Eman Hashim Mibilaogy Manohitra Ny Berlitz Ejypta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2018 2:12 GMT
Milaza amintsika ny tantara i Eman
Tamin'ny Jolay 2008, notendren'i Berlitz Ejipta mba hampianatra amin'ny tetikasa antsoina hoe “Edu Egypt“, izay manohana ny fanabeazana an'i Ejipta aho. Tetikasa iray notontosain'ny minisiteran'ny serasera ary ny hanampy ireo nahazo diplaoma tao amin'ny sampan'ny varotra sy ny siansa momba ny informatika tao amin'ny Oniversite Ain Shams sy ny Oniversiten'i Kairo no tanjona. Manome azy ireo fahaizana tsy mavesatra sy teny anglisy. Berlitz no tompon'andraikitra amin'ny fampianarana teny Anglisy ary teo aho nampianatra teny anglisy ambaratonga telo ho an'ny kilasy telo ahitana mpianatra 12-15 isaky ny kilasy, tao amin'ny sampan'ny varotra, Oniversite Ain Shams.
Tsy hiresaka momba ny karazana “tontolon'ny asa” izay natrehinay, amin'ny maha-mpiasan'ny Berlitz tamin'ity tetikasa ity izahay – fa tantara hafa tanteraka izany, saingy tsy dia mahafinaritra loatra – Sady efa vita ny fampianarana ankehitriny.
Tapabolana lasa izay, nahazo ny mari-pahaizany avy amin'i Berlitz ireo mpianatro 40 satria nanatrika ny ambaratonga telo tao Berlitz Ejipta izy ireo ary nahomby tamin'ireo ambaratonga telo miaraka amin'ny isa.
Aty amiko ny taratasim-panadinana ho an'ireo mpianatro rehetra ambaratonga faha-2 sy faha-3
Aty amiko ny taratasim-panadinana (efa voavaly) rehetra ho an'ireo mpianatra ireo ihany ambaratonga faha-2 sy faha- 3
Aty amiko ny taratasy vokam-panadinana miaraka amin'ny sora-tanan'izy ireo, ambaratonga faha- 2 sy faha-3
Niantso ahy ny iray tamin'ireo mpianatro satria gaga tamin'ny isa izy ary nolazaiko taminy fa diso ny isa azony ary nandainga izy ireo, ary nilaza taminy koa aho fa tsy maintsy asehontsika azy ireo ny nataon'izy ireo satria diso.
Namaly ny mpianatra:
De maninona! Tsy hisy na inona na inona hitranga aminao dokotera. Heverinao ve fa misy olona afaka mahazo ny zony eto amin'ity firenena ity? Nahoana aho no tokony hahazo ny ahy?
Manontany i Eman Hashim ankehitriny.
Izany ve no tokony hampianariko ny mpianatro? Izany ve ny hoe “FANABEAZANA AN'I EJIPTA”? Inona no tokony holazaiko amin'ity mpianatra ity? ary Ahoana no ahafahako miatrika ny mpianatra ao aorian'izany rehefa handeha hampianatra azy ireo momba ny “maha izy anao”, “ny Zon'olombelona” sy ny sisa rehetra amin'ireo teny mahafinaritra ireo aho?
Indray mandeha aho nolazain'ny iray tamin'ireo mpianatro fa sary tsy misy lanjany tena izy ireo ary nilaza taminy aho fa miankina aminy sy ny zavatra inoany ny rehetra!
Fantatro fa resaka fotoana izany alohan'ny ahafantaran'ny olona ao Berlitz ity lahatsoratra “voalohany fa tsy farany” ity ary tsy azoko an-tsaina ny mety ho fihetsik'izy ireo – saingy tsy sarotra alaina sary an-tsaina – am-pahatsorana, tsy miraharaha aho!